डा. खत्रीको लापरवाहीले क्पाप्टेन राणाको मृत्यु,काउन्सिलद्वारा कारबाही सिफारिस – Health Post Nepal
२०७८ साउन ८ गते ११:००
बिरामीको उपचारमा लापरवाही गरेको ठहर गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एक चिकित्सकलाई कारबाही गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन राकेश जंगबहादुर राणाको उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै काउन्सिलले मुटुरोग विशेषज्ञ डा ऋषि खत्रीलाई कारबाही गरेको हो ।
नेपाली सेनाको अस्पतालमा मुटुरोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत डा खत्रीलाई १ वर्षसम्म मुटु रोग विज्ञको हैसियतमा काम गर्न नदिने निर्णय काउन्सिलले गरेको छ।
क्याप्टेन राणाको २०७७ मंसिर १० गते हृदयघातका कारण मृत्यु भएको थियो। मंसिर ९ गते राति मलेसियाको उडानका लागि तयारी गर्दै गर्दा अचानक असहज महसुस भएपछि राणालाई ह्याम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पताल भर्ना गरेको भोलिपल्ट उनको मृत्यु भएको थियो।
अस्पतालका निर्देशक डा ज्योतिन्द्र शर्माले उपचार गर्न अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको र त्यसभन्दा अगाडिको उपचार प्रक्रियाबारे आफू जानकार नभएको बताए।
राणाको मृत्युपछि उनको परिवारले स्वास्थ्य जाँचमा संलग्न डा खत्री र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नागरिक उड्डयन चिकित्सा निर्धारक डा राजीवकुमार देवविरुद्ध उजुरी गरेका थिए।
क्याप्टेन राणकी श्रीमती पुष्पा राणाले ४ चैत २०७७ मा काउन्सिलमा उजुरी दिएपछि काउन्सिलले पाँच जना विज्ञहरुद्वारा उपचार प्रक्रियाको छानवीन अघि बढाएको थियो । सो क्रममा खत्रीको उपचार सही नभएको र चिकित्सकीय लापरवाही गरेको ठहर गरेको हो। छानबिनपछि उपचारमा लापरवाही देखिएको ठहर गर्दै काउन्सिलले डा खत्रीमाथि कारबाही गरेको हो।
एक वर्ष तालिम र थप सिकाइ गरेको प्रमाण पेश गरेपश्चात मात्रै मुटुरोगको उपचार गर्न गराउन अनुमति दिने निर्णय पनि काउन्सिलले गरेको छ । यस्तै, काउन्सिलले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा चिकित्सकको नियुक्ति तथा निजहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धमा पनि विभिन्न व्यवस्था गर्न निमगलाई आग्रह गर्ने निर्णय काउन्सिलले गरेको छ।
नोट : समाचारमा ह्याम्स अस्पताल सम्बन्धि तथ्य फरक पर्ने गएकाले परिमार्जन गरिएको छ।
One thought on “डा. खत्रीको लापरवाहीले क्पाप्टेन राणाको मृत्यु,काउन्सिलद्वारा कारबाही सिफारिस”
सीताराम सुवेदी says:
सारै राम्रो एक्सन किनकि चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै लापरवाही बढेर गएको छ ।